Uvuyo, ulonwabo, ukuthuthumela, ukwesaba, ukunyamekela, ukungathandabuzeki - nini uya kuhlala ufumana iimvakalelo ezinjalo ngaphambi kokulala nomntu omtsha? Nonke nilinde le nto, niyilungiselele, niluncedo umnqweno kwaye unxibelelwano alupheli ngendlela oyifunayo ngenxa yamava akho, kodwa nangenxa yeempazamo ezinokwenzeka. Indlela yokwenza isondo sokuqala sijabulise ngayo bobabini?
Imithetho yokuqala ye-sexaso kunye neqabane lakhe elitsha
Ngesondo sokuqala esihle, into ebalulekileyo yithuba elifanelekileyo, xa bobabini bekulungele kwaye bafuna ukusondelana komnye nomnye, ukuguqula ubuhlobo bakho kwinqanaba elilandelayo. Xa umntu ephikelela kakhulu, kwaye umfazi akaqinisekanga ngaphambi kokuphela kwaye uye wavuma ukutshatyalaliswa kuphela ngenxa yokwesaba ukulahlekelwa ngumlingane, ngoko akanakukunandipha. Ngenxa yalesi sizathu, mahlale isisombululo sibe yizzshshchina, kuba ukuzithemba komnqweno, ukuzimisela kwentombazana kuyimpumelelo yokuqala yokwabelana ngesondo.
1. Kubalulekile ukuncumoza entloni
Ukudibanisa kuhlale kunokwenzeka. Ngokomzekelo, bhinqa iibunzi zabo, baqhawula ngamadolo njalonjalo. Ungazami ukuziphatha njengokungathi akukho nto eyenzekayo, uzama ukukhupha umzuzu onzima. Smile uze ubange umlingane wakho. Dlala ukudideka okungahleliwe kwaye uqhubeke ukwenza oko umise. Akunxulumani nobuthathaka, kodwa isimo sengqondo esinamahloni kubo, esenza isigqila kubaqabane.
2. Iingcapheko zexesha elibhetele zihamba kakuhle
Amaxesha amahle kakhulu akufanele ahlehliswe ixesha elide, kodwa akukho mfuneko yokukhawuleza ukunyusa kwabo. Ubudlelwane bezesondo ngokukhanya okukhanyayo, "nzima" kunye neendawo ezingavumelekanga, izesekeli ezithile - konke oku kufuna iqondo elithile lolwalamano noSpartner kunye nokwethemba omnye komnye. Abaninzi bayavuma ukuzama okuhlukeneyo kuphela ukuba bangabi zakomleksovannoy "lula".
Unenkxalabo yokuba wena, umzekelo, unesifuba esingafanelekanga, i-cellulite kwaye ukhathazekile ngeentsilelo zakhe. Kuyinto yemvelo xa ufuna ukuba nombono omnandi ukuvelisa omnye nomnye. Ngokomzekelo, ukukhanya okukhanyayo kunokukunqanda ukuba ungabonakali njengomthandi omhle, kwaye isondo sesibini asikwazi. Xa konke kwenzeka ngokuthe ngcembe, uya kufinyelela okwangoku kwiintlobo ezahlukeneyo zovavanyo kunye nenkululeko.
3. Thetha omnye nomnye
Amava ngamabini ahlukeneyo abonisa ukuba iimvakalelo eziye zafunyanwa ngexesha lesondo lokuqala (kwaye kungekhona kuphela) zilibalekile ngexesha. Uyakhumbula nje ukuba uzive ulungile. Nangona kunjalo, xa imemori igcina imida, izibongo, amagama, ziza kutsalwa ngoluhlu lweemvakalelo ezonwabileyo nezomnandi, oye wafumana ngalo mzuzu.
4. Tshela iqabane lakho ngendlela othanda ngayo
Ngexesha lokulala ngesondo lokuqala, akukho mntu unemephu yasemaphandleni, kwaye kutheni i-sexbolshe ifana nokuhlonishwa. Ukungaqiniseki okunjalo ukungaqiniseki kuwe, okanye kumlingane awunamathele. Ngoko ke, lixesha lokubeka ezinye iziganeko, amanqaku "kwimephu" yakhe kunye nemizimba yakho. Ndixelele okulungileyo ukuba akwenze uzive ulungile. Jonga kwakhona indlela awasabela ngayo, ukwenzela ukuba iindawo ezixhamlayo zomzimba wakhe azihlali ziyimfihlakalo.
5. Akufanele uyenze yonke into kanye
Ewe, ufuna ukugxininisa komnye nomnye, ukubonisa ukuba uhambe kangakanani ekufundeni uthando lwenyama, okanye ufuna ukuphinda isalathisi sefilimu ecatshulweyo kunye nomxholo obusondeleyo. Nangona kunjalo, ngesondo sokuqala akusona ixesha lokulinganisa ulwazi lwabo, kunye nexesha lokuthandana kuphela.
Iinkalo ezahlukeneyo zesini, okanye utshintsho oluqhubekayo lwe-sexmade yokuqala luba ngumzimba. Le nto yonke inokuhlazisa umntu, kuba kulo msebenzi, amadoda angacingi ngento awaziyo, kodwa malunga nokuba wafunda phi. Kwakhona, kunzima, kuba kuyimfuneko yokwabelana ngesondo, kwaye ukuyibuyisela kumlingane, kodwa ukuba ungacingi ukuba idumela lakho naziphi na iindleko akufanele lichithwe.
6. Musa ukuxelisa
Lo mbuzo unzima kakhulu, kuba ngezandi ezahlukileyo unokwenza uzuze umlingane wakho, mkhuthaze ngakumbi. Nangona kunjalo, kukho olunye uhlangothi: xa ungathandi oko umlingani owenzayo, kwaye ukhathele, kodwa umfanekiso wesigxina somdla wakho, ngoko ubeka engozini into efanayo ngexesha elizayo. Ukuba awufuni ukuphelisa ulwalamano lwakho emva kwesondo sokuqala, thabatha inyathelo uze uxelele loo ndoda indlela yokuphatha ngayo, okanye ulindele ukudideka okulandelayo.
7. Kungcono ukufeza ngenyameko uxhulumano lokuqala kunokukhawuleza
Ukungabikho komsebenzi wokulala, ukulala ngokukhawuleza, ukuthanda imfucumfucu ivuyisa. Ewe, uya kufumana i-orgasm ende ende ngokukhawuleza, kodwa phawula ukuba oku, ukukhawuleza-ukukhawuleza, ekugqibeleni, kunokukhokelela "Ingaba yintoni na?". Awukhumbuli into eyenzekayo, ngoko isondo sokuqala asiyi kukhunjulwa, sishiye ukungabi nalutho esikhundleni saloo ndawo, endaweni apho ilungelo lifanele libe luthando, uthando, kunye nexesha elide, kumema umnxeba ukuthuthumela.
8. Xelela iingcamango "Hayi"
Ukusuka kwiingcamango ezibuhlungu awunayo i-elasticity eyaneleyo kunye nesisu esincinci ukuba usilahle. Kwaye nabanikazi bomzimba ogqibeleleyo baya kufumana ubuncinane ubunzima abathathu.
Ndifuna nje ukukukhumbuza kwakhona ukuba kwimeko yolonwabo olukhulu, iqabane lithanda yonke into ephantsi kwezandla zakhe, imilomo yakhe. Nokuba isisu esipheleleyo siya kuba yindawo emnandi kumzimba. Musa ukuyinkimbinkimbi kwaye uzame ukuphumla kangangoko kunokwenzeka.
9. Hlala uhlonipha ukhuseleko
Kungakhathaliseki ukuba ushushu kunye nomzwelo njani umgudu wesini, kungakhathaliseki ukuba unqwenela kangakanani umnqweno wokugatya ukusebenzisa iikhondom, ngokubanzi kuzo zonke iindibano, kuyafaneleka ukuba sisondele kule ngxaki ngokukhawuleza, ukuyithatha njengomthetho. Ukuba kuphela wena kunye neqabane lakho lingenayo imibhalo malunga nokungabikho kwezifo ezithunyelwa ngendoda yesondo, ngoko-ke ukusebenzisa i-contraceptive kuyimfuneko. Emva koko, iinyanga zonyango kunye nomdla, kunye nezobuhlobo bezesondo azifanelekanga.
10. Lo mgaqo mnye awukho mgaqo
Musa ukuphulaphula ukuba kukho iingcebiso, ezifanelekileyo ukuphulaphula ukuziphatha kwakho ngobusuku bokuqala kunye nomlingane. Emva koko, kungcono ukuhlala wendalo ngokwemvelo, kungekhona ukuzama ukuzenza. Emva kwakho konke, ukunyaniseka kuya kwandisa ukuzithemba kuwe kunye nokuzonwabisa. Kwakhona, ukuba umntu omtsha akayiyo umviwa wobudlelwane obude, ngoko unayo inkundla yithuba lokuphucula, ukuqeqesha, ukwenzela ukuba yonke into ibe yinqanaba eliphezulu.
Ngesondo ngaphandle kwemimiselo
Ukuba lonke ixesha ufuna isondo: i-temperament okanye i-nymphomania?
Ubunzima bobudala obuphakathi kwamadoda
Kucima ukoma kwakho umntu usuku lonke
Umvuzo "I-Grinnie" neentliziyo ze-turkey kunye nohlaza g
Indlela yokuziva unentembelo ebomini
Indlela yokukhetha ubuso obunene bompu?
Vula isangweji kunye neetamatato ezibhaka, ushizi
Cinnamon cider kunye nomango
Indlela yokufumana umntu ukuba enze imisebenzi yasekhaya
Amanyathelo omnxeba wokubanda kunye nomkhuhlane